Wasiirka Warfaafinta Puntland “Ciddii nasoo weerarta iyada ayaa jab la kulmi doonta” (dhegayso) – Radio Daljir
Wasiirka Warfaafinta Puntland “Ciddii nasoo weerarta iyada ayaa jab la kulmi doonta” (dhegayso)
Janaayo 16, 2018 10:43 b 0
Wasiirka warfaafinta Puntland Cabdixirs Cali Qarjab ayaa ka hadlay xiisadda deegaanka Tukaraq ee gobolka Sool oo ay la wareegeen ciidamada Somaliland, xilli uu Puntland booqasho ku joogay madaxwaynaha dowladda faderaalka ee Soomaaliya.
Shir jaraa’id uu ku qabtay Bosaso ayuu sheegay inay tahay waajib diini ah qofka inuu sharaftiisa iyo naftiisa difaaco, isagoona sheegay inay dowladda ay iska difaacayso weerarka uga yimid Somaliland.
Wasiirka ayaa dhanka kalle sheegay inay tahay wax lala yaabo gumaysi la iska qaaday in lagu doodo xuduudo uu sameeyey, waxaana uu xusay dadka gobolada Sool, Sanaag iyo Buuhoodle ay xitaa duulaan ku ahayn Burco iyo gobolada Somaliland.
Dhaqdhaqaaqyo ay wadaan ciidamada Puntland ayaa ka socda gobolka Sool, halkaasi oo ay ciidamo badan ku baxeen si’ay usoo celiyaan deegaamada ay ciidamada Somaliland ay la wareegeen.
Shir looga hadlayoMaaraynta Masiibooyinka oo Muqdisho ka furmay (Sawirro)